Halkan Ka Akhriso Warka Ay Soo Saareen Labada Kaptan Ee Jordan Henderson Iyo Harry Maguire? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kabtanka kooxaha Premier League oo ay hogaaminayaan Jordan Henderson iyo Harry Maguire ayaa soo saaray war rasmi ah kadib markii ay maalmo badan soo hogaaminayeen qorshe ay ku midaynayaan lacagaha ay ciyaartoyda kooxaha Premier league dhimi lahaayeen.
Jordan Henderson iyo Harry Maguire ayaa door wayn ka qaatay in dhamaan kabtanaha kooxaha Premier league ay todobaadkii la soo dhaafay shir yeesheen waxayna hadda soo saareen war rasmi ah oo ay go’aankooda ku shaaciyeen.
Warka rasmiga ah ee ay kabtanada kooxaha Premier Leauge soo saareen ayaa lagu cadeeyay in ciyaartoyda kooxaha Premier League ay abuureen sanduuq dhaqaale oo loo bixiyay #Playerstogther kaas oo ay kula midoobeen sanduuqa kale ee samafalka ah ee NHS Charities Together kaas oo uu maamulo adeega caafimaadka qaranka UK ee NHS.
Kabtanada kooxaha Premier league ayaa hadda barahooda bulshada ku soo daabacay go’aanka rasmiga ah iyo qoraalka ay soo saareen waxaana lagu bilaabay: “War saxaafadeedka COVID-19- Isku taga ciyaartoyda”.
Qoraalka kabtanada kooxaha Premier league ayaa lagu yidhi: “Intii lagu jiray todobaadkii la soo dhaafay, waxay koox ciyaartoyda Premier League ahi si wada jir ah u yeesheen wada hadalo kaas oo ay aragtidu ahayd in la abuuro sanduuq loo adeegsan karo in lcagta loogu qaybiyo halka inta ugu badan looga baahan yahay ee qalalaasaha Covid-19”.
“Iyada oo la caawinayo kuwa safka hore ku daagalamaya ee NHS iyo meelaha muhiimka ah ee u baahan. Kani waa waqti ku adag wadankeena iyo adeega caafimaadkeena NHS, waxaana naga go’an in aanu si walba oo la awoodo u caawino” ayaa qoraalka la sii raaciyay.
War saxaafadeedka kabtanada iyo ciyaartoyda kooxaha Premier League oo aad u dheer ayaa lagu yidhi:”Waxaanu xaqiijin karnaa kadib markii aanu wada xaajoodyo xoogan oo u dhexeeyay ciyartoy badan oo ka yimid dhamaan kooxaha Premier League in aanu abuurnay bilaw wada jir ah oo ciyaartoyda ah #Playerstogether, waxaananu lamaane la noqonay NHS Charities Togother(NHSCT) si loo caawiyo iyaga in si deg deg ah oo hufan lacagta loogu qaybiyo halka ay inta ugu badan uga baahan yihiin”.
NHS Charities Togother(NHSCT) oo ay ciyaartoyda kooxaha Premier league kula midoobeen sanduuqa dhaqaale ee ay sida gaarka ah u samaysteen ayaa ah ururka dalada in ka badan 150 ururo samafal oo u diwaan gasha adeega caafimaadka UK ee NHS.
Waxa uu go’aankani meesha ka saaray eedayntii ciyaartoyda kooxaha Premier league loogu soo jeedinayay in ayna ogolayn in ay mushaarkooda dhimaan, balse taas badalkeeda waxay go’aansadeen in ay samaystaan sanduuq dhaqaale oo gooni u ah kaas oo ay ku caawinayaan dalada adeega caafimaadka qaranka UK si markiiba ay lacag ugu helaan meelaha looga baahan yahay.
Warkan rasmiga ah ee ay ciyaartoyda kooxaha Premier league soo saareen waxa uu soo gaba gabaynayaa doodii ahayd in ciyaartoydu ay door ka qaataan la dagaalanka Coronavirus iyada oo lacagta ay kooxaha Premier league u dhimi lahaayeen ka doortay in ay dadka uu sameeyay COVID-19 ay si toos ah ugu caawiyaan iyaga oo maraya adeega caafimaadka qaranka UK.
Ciyaartoyda kooxaha Premier League ayaa wada bilaabay in ay qoraalka war saxaafadeedkan soo dhigaan baraha ay bulshada ku leeyihiin si ay u muujiyeen in ay go’aankan u dhan yihiin.